I-china izinyawo zokulinganisa ezingaguquguquki ezenziwe ngokwezifiso - abakhiqizi - i-Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Izingxenye zefenisha yePlastiki>Izinyawo zokulinganisa ezingaguquguquki
Izinyawo zokulinganisa ze-M6 zefenisha
Izici zomkhiqizo: ziqinile futhi zizinzile, zinciphisa umsindo, zivikela umhlaba ekulimaleni Ukusetshenziswa koMkhiqizo: zilungele amalunga wamatafula, amatafula, indle, njll. Ziyini izinyawo zefenisha eziguquguqukayo? Izinyawo ezilungiselelwa ifenisha, ezibizwa nangokuthi ama-foot pads, zisebenzisa izikulufo ukuxhuma phansi kwefenisha (amatafula, izihlalo, amabhentshi) ukuvikela phansi ukugqoka, ukunciphisa umsindo, nokwandisa ukuphakama kwefenisha. Ububanzi besicelo (umzimba omncane, inhloso enkulu): amakhabethe / izinyawo zekhabhinethi, njll .; ifanele izikhathi eziningi, amashalofu edeski, njll. Udinga unyawo oluguquguqukayo ukusindisa umsindo odalwa yifenisha yansuku zonke ngaphandle komcamelo lapho unyakaza, futhi kungavimbela naphansi ukugqoka futhi vumela ifenisha yakho isebenzise ......
Izesekeli zezinwele eziguquguqukayo